Olee otú dezie GoPro 4K Video
GoPro, ihe emereme igwefoto onye, ​​ka revamped ya dum ngwaahịa nso na-agụnye ihe Ọzọkwa atụmatụ nke 4k-eru dike 3 Edition. Ọhụrụ version dubbed GoPro HERO3 kọwawo ya dị ka ịbụ 30% nta, 25% ukwuu amụ na-2 ugboro ọzọ dị ike tụnyere ndị gara aga ụdị. Ọzọkwa, ihe nlereanya a bụ na mmiri na-egosi na ike gear ndokwasa. Ọ bụkwa wearable. Ọzọkwa, a ngwakọ igwefoto-camcorder ike weghara àjà ihe ọṅụṅụ-n'obosara nha nke 1440p na 48fps, 1080p na 60 fps nakwa dị ka 720p na 120 fps videos. Ya foto ikike bụ 12MP na-atụ n'anya ọnụego nke 30 photos bụla nke abụọ. Ma ọ bụrụ na nke a abụghị ma nnukwu, igwefoto bụ dị ka nke ọma, Wi-Fi nyeere.
GoPro HERO3 nwere na-adịbeghị anya gara aga see akụkọ site na ya mara ọkwa na ndị ọhụrụ igwefoto abụghị nnọọ ike dị nnọọ a 2.7K kama a ijuanya 4K. Nke a 4K mode bụ kemgwucha bara uru dị ka ihe n'okpuru-crank maka ngwa ngwa ngagharị. Otú o sina dị, ọtụtụ ọrụ eleghị anya okosobode nsogbu na-agbalị Ibu Ibu 4K MP4 (H.264) si ọhụrụ GoPro maka ebumnuche nke edezi. Ka a okwu nke N'eziokwu, ọtụtụ ga-ekweta na ọ hụrụ 4K video siri ike mbubata n'ime ọtụtụ editọ maka ebumnuche nke edezi.
Mere nke a na-eme bụ ihe ọtụtụ ndị na-ma na-aghọta. Otú ọ dị, m ga-eji nkenke oge kọwaa tupu ya etinyewe inye a nzọụkwụ site nzọụkwụ guideline nke otú dezie GoPro 4K video. Ihe mere ọtụtụ editọ adịghị ekwe ka importation nke 4K video maka edezi bụ na ha adịghị akwado 4K video faịlụ Ọkpụkpọ maka ibubata site na oge-akara dabeere video edezi software. N'ihi ya, n'ihi na nwa afọ importation nke 4K video, ọ bụ ukwuu amamihe na-akpa tọghata GoPro video usoro PC ma ọ bụ Mac na ndị kwesịrị ekwesị codec maka edezi ngwa.
Ajụjụ mgbe ahụ bụ, "nke ngwa nwere ike aka workflow maka edezi nke GoPro 4K video on PC na-enweghị na-ejere ya mbụ." Na nke a, n'elu converters bụ Pavtube Video Converter Ultimate ma ọ bụ iMedia Ntụgharị na-enwe ike transcode GoPro 4K E ka adabara format maka ot edezi ngwa dị ka Sony Vegas, uchu, Cyberlink, Windows Movie Onye kere, rụbichiri na mgbidi, Premiere mgbe eji windows na iMovie, FCP X,, uchu, na Final Cut Express mgbe eji Mac.
Iji tọghata GoPro 4K vidiyo na PC / Mac maka ebumnuche nke edezi, nwere ike ị chọrọ eso ndị a.
Nzọụkwụ 1: Wụnye GoPro dike 3 Ntụgharị maka Win / Mac
Nzọụkwụ mbụ ga-iji wụnye GoPro dike 3 Ntụgharị maka Win / Mac. N'ụzọ ezi uche, ọ dịghị ihe pụrụ ime na-enweghị software. A oyiri nke software nwere ike nweta online.
Nzọụkwụ 2: Ibu Ibu Go Pro 4K faịlụ nwetara ụdị Gaa Pro igwefoto na na Ntụgharị
Nke a nwere ike mere site ma navigating iji faịlụ icon na faịlụ ebe ma ọ bụ nanị site adọkpụpụta faịlụ ozugbo na usoro. Ọ dị mkpa iburu n'obi na multiple faịlụ nwere ike kwukwara na e depụtara na ngwa na njikere maka edinam. A nwere ike mere ma site na-adọkpụpụta navigating ha na ọnọdụ na-ahọpụta niile faịlụ ezubere iche site na-ejide ala akara bọtịnụ.
Nzọụkwụ 3: ahọpụta ndị kwesịrị ekwesị mmepụta format
E nwere usoro igbe na a dobe ala menu. N'ihi na Mac ọrụ na-eji Final Cut Pro ihe atụ, ha nwere ike họrọ Apple Pro nchapụta 422 (* .mov) "maka edezi iji FCP 6/7 / X. Hụ okpuru,
Ọ bụrụ na edezi na iMovie họrọ Apple Inter-ikpeziri Codec (AIC) (* .mov) mgbe na uchu MC, ọ na-atụ aro na ọrụ họrọ uchu DNxHD (* .mov) N'aka nke ọzọ, windows ọrụ kwesịrị họrọ AVI / WMV / MPEG -2 ka họọrọ mmepụta usoro maka edezi bụ Sony Vegas, rụbichiri na mgbidi, Premiere, uchu, Cyber-njikọ ma ọ bụ Windows Movie kere ya.
Nzọụkwụ 4: Họrọ chọrọ ntọala
Iji mwube ihe oyiyi, na ọ bụ ihe amamihe na-ahọrọ ihe ndị ha chọrọ mmepụta mkpebi na bitrates. Ka a okwu nke eziokwu, ntọala icon ohere ọrụ ịhọrọ chọrọ ntọala maka mmepụta faịlụ.
Nzọụkwụ 5: Transcode GoPro 4K videos ka dakọtara edezi format
Ozugbo ntọala na-mere, 4K videos dị njikere-converted n'ime ihe kwesịrị ekwesị usoro maka edezi. Na-esote bụ ya mere ka pịa "tọghata" akara na-amalite transcoding ndị Go Pro 4K video enyi na enyi usoro maka edezi. Ọ dị mkpa iburu n'obi na Ntụgharị uche transcode na GoPro 4K video faịlụ formats n'ime formats na ike ga-dezie site ọzọ edezi software. The software ga-ekwe ka maka ndị zuru okè ọdịyo na video mmekọrịta.
Ọ bụrụ na ị na-eche na nke a bụ oke ihikosi n'ihi unu, i nwere ike ịgbalị Wondershare Filmora (mbụ Wondershare Video Editor), nke nwere ike idezi GoPro 4K video faịlụ na mfe na-eji ma dị ike edezi ngwaọrụ. Download free ikpe mbipute n'okpuru.
Top Iri 4K Video Downloader Alternatives
Top 10 4K Video Ọmụmaatụ
Olee otú Gbaa na dezie a 4K Video on Galaxy Cheta 3
Olee otú iji tọghata MOD ka AVI
Movie Ime Software maka Mavericks
Sony Video Editor: Olee dezie Videos si Sony camcorder
Olee otú Naghachi ehichapụ Videos si SD Kaadị
Olee otú iji tọghata YouTube Songs ka MP3 Format
> Resource> Video> Olee dezie GoPro 4K Video